Ciidamada Booliska Somaliland Oo Gacanta Kusoo Dhigay Booyada Laga Afduubay Magaalada Berbera Habeen Hore +Sawiro.
Tuesday January 24, 2017 - 10:28:50 in Wararka by Halgan News
Berbera(Halgan)Waxa magaalada Berbera habeen hore laga afduubay booyad loogu talo galay in lagu gaadhsiiyo biyo dadka abaaruhu ku halakeeyeen gobolka Saaxil, taas oo ay ciidamada Boolisku gacanta kusoo dhigeen.
Waxaana lagu soo qabtay degaano ka tirsan gobolka Saraar, kuwaas oo ay la tageen raggii afduubtay booyadaasi, waxaana lagu qabtay degaanada lagu magcaabo Ceelal Iyo Bali Caraale.
Gaadhigan booyada ah ayaa waxa iibintiisa iska kaashaday Dekeda magaalada Berbera ,Maamulka gobolka Saaxil iyo dawlada hoose ee magaalada Berbera , iyaga oo ugu talo galay inay biyo ku gaadhsiiyaan dadka abaaruhu ay saameeyeen ee gobolkaasi.
Ilaa hadda lama garanaayo sababta keentay inay nimankaasi ay afduubtaan booyadaasi dadka tabaalaysan loogu shaqaynaayey, iyada oo ay ciidamada Boolisku gacanta ku dhigeen booyadaasi, halka ay baxsadeen laba nin oo mid darawalkii ayaa , halka kalena uu ahaa nin hubaysnaa oo booyada la socday.
Waxaanay ciidamada Boolisku kusoo celiyeen booyadaasi magaalada Burco oo la keenay , lana filaayo inay usoo gudbiyaan magaalada Berbera.